ढल्यो विश्वकै ठूलो र २५३ बर्षे बरको रुख – Hotpati Media
आज: | Sun, 07, Jun, 2020
होमपेज / बिचित्र संसार
ढल्यो विश्वकै ठूलो र २५३ बर्षे बरको रुख
१० जेष्ठ २०७७, शनिबार १९:०९ मा प्रकाशित (2 हप्ता अघि) अनुमानित पढ्ने समय : १ मिनेट
काठमाडौं-अन्तराष्ट्रिय बायोलोजिकल दिवसको एक दिन अघि बंगालको खाडीबाट उठेको समुद्री आँधि एम्फनले भारतको पश्चिम बंगाल राज्यलाई पनि नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ ।
शुक्रवार आएको एम्फन आँधीका कारण विश्वकै ठूलो बरको रुखमा समेत क्षति पुगेको भारतीय समाचार संस्था इण्डीयाटिभी न्युजले जनाएको छ ।
एम्फन आँधिले उक्त बरको रुखमा क्षति मात्र पुर्याएन, त्यहाँ रहेका दुइ मध्ये एक कल्प वृक्षमा समेत क्षति पुर्याएको छ । हावाले उक्त रुख पुर्ण रुपमा लडाएको छ भने बरको रुखका हाँगाहरु समेत भाँचेको छ ।
भारतको कलकत्तास्थित जगदीशचन्द्र बोस बोटानिकल गार्डेनमा २५३ बर्षे वरको रुख रहेको छ । सन् १७८७ मा त्यो वरको रुख त्यहाँ रोपिएको थियो । रोप्ने बेलामै त्यो वरको रुख २० वर्षको भइसकेको थियो ।
सो वरको रुख यति विशाल भइसकेको छ कि त्यसका लहरा तथा जराहरु यत्रतत्र फैलिँदा नयाँनयाँ हाँगा पलाएर पूरै जंगलजस्तै बनिसकेको छ । झ्वाट्ट हेर्दा त्यो पूरै जंगल केवल एउटा वरको रुख हो भनेर अनुमान गर्न गाह्रो पर्ने खालको छ ।
१४ हजार वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त रुखको उचाइ २४ मिटर रहेको छ । यसका तीन हजारभन्दा धेरै लहरा छन्। जो जमिनसम्म पुगेर जरामा परिणत भएका छन् र त्यहाँबाट फेरि नयाँ हाँगा पलाएको छ ।
त्यसैले यसलाई दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो हिँड्ने रुख पनि भनिन्छ । यो वरको रुखमा ८० भन्दा धेरै प्रजातिका चराहरु बास बस्ने गरेका छन् ।
सन् १८८४ र १९२५ मा कलकत्तामा आएको आँधीबेरीले त्यो रुखमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको थियो र धेरै हाँगाहरु भाँच्चिएका थिए र काटिएको थियो । तर, यो रुख त्यसपछि पनि पलाउन छाडेन र दुनियाँकै ठूलो रुख बन्न सफल भयो ।
सन् १९८७ मा भारतले यो वरको रुखको तस्वीरसहितको हुलाक टिकट पनि प्रकाशित गरिसकेको छ ।
यो रुख साँच्चिकै भीआईपी रुख हो । जसको रेखदेखमा १३ जना कर्मचारी खटिएका छन् । जसमा वनस्पतिविददेखि मालीसम्म रहेका छन् । यो रुखमा केही हानिनोक्सानी भएको छ कि भनेर बेला–बेलामा चेकजाँच पनि गर्ने गरिन्छ ।
बिचित्र संसार सम्बन्धि थप
धेरै दुध दिएर विश्व रेकर्ड राख्ने भैसीको नाम सरस्वती !
विकिनीमा नर्स देखेर कोरोना बिरामी छक्क !
कोरोनाले अनौठो विवाह- अनलाईनबाट सामान, जूममा जन्ती
१०३ बर्षे बृद्धले २७ बर्षकी युवतीसँग लगनगाँठो कसेपछि
यात्रुसँग मनोमानी भाडा असुल्न थालेपछि कूटनीतिक उडानबाहेक सबै चार्टर्डमा रोक
कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि क्वारेन्टिनबाट छाडिएका पाँचजना पक्राउ
सुनको भाउ फेरि दश हजारले बढ्यो
साइकल पाएपछि छात्रा खुशी
आर्थिक राजधानी वीरगञ्जमा पसल खुलेपछि बढ्यो चहलपहल
कोरोनासँग जुध्न नेपाललाई बेलायतको आर्थिक सहयोग
आफूखुशी अन्तरराष्ट्रिय चार्टर उडान नगर्न वायुसेवा कम्पनीलाई निर्देशन
संजय श्रीपालको “अछुत एक अधुरो प्रेम” सार्बजनिक
भारतमा कोरोनाः झण्डै ७ हजारको मृत्यु, २ लाख ४६ हजारमा कोरोना पुष्टि
वाग्मती प्रदेश विश्वविद्यालय : आउँदो वर्षदेखि शैक्षिक कार्यक्रम सुरु हुने
विश्वविद्यालयले अनलाइन प्रणालीमार्फत पठनपाठन गर्दै
डोटीको क्वारेन्टिनमा बसेका १९ वर्षका युवकको मृत्यु
किमकी बहिनी भन्छिन- ‘उत्तर कोरिया विरोधि गतिविधि नरोके ठूलो मुल्य चुकाउनुपर्छ’
सोल-हालैका दिनहरुमा दक्षिण कोरियामा रहेका उत्तर कोरियाली तथा उत्तर कोरिया विरोधिहरुले प्योङयाङ विरुद्ध विभिन्न प्रदर्शन जारी राखेका छन् । उक्त... विस्तृतमा
अमेरिकामा ५७ जना प्रहरी अधिकारीले दिए आकस्मिक सेवाबाट राजिनामा